Mpanaparitaka boribory, mpiorina boriborintany mihetsika - DaDa
Mpanaparitaka tranga boribory (MCCB)
DAM1 Mpanaparitaka tranga boribory
MCCB karazana azo ovaina amin'ny hafanana sy andriamby
DAM3 Mpanaparitaka tranga boribory
DAM4 Namboarina Case Circuit Breaker DPX
DAM5 Namboarina Case Circuit Breaker 3VL
DAM7 Namboarina Case Circuit Breaker ABE
DAM8 Voavolavola Case Circuit Breaker ABN
DAM9 Namboarina Case Circuit Breaker NF
DAM10 Namboarina Case Circuit Breaker NS
Mpamadika faribolana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fiarovana bebe kokoa (RCBO)
RCAB elektromagnetika DABF-63
DABL-63 RCBO elektronika
Mpamadika faribolana ankehitriny (ELCB & RCCB)
DAB6LE-63 Mpanaparitaka faribolana amin'ny tany
DAF360 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL1-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL2-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL3-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL4-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL5-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL6-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL7-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL8-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
DAL9-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
Dal10-63 Mpamadika faribolana ankehitriny
Breaking Circuit Breaking Earth (ELCB)
Breaking Circuit Protection Protection (MPCB)
Boaty fizarana maodely
Fitaovana famaky faribolana
Mpanapaka fizaran-tany vita amin'ny tranga
Mpanaparitaka faribolana amin'ny tany
Mpandika Circuit Miniature Modular
Mpamadika faribolana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fiarovana bebe kokoa
SHANGHAI DADA Electric Electric. Vokatra maro samihafa manarona ireo mpandika faribolana kely (MCB), mpamadika faribolana ankehitriny (RCCB), mpamadika faribolana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fiarovana bebe kokoa (RCBO), mpamaky faritra misy endrika (MCCB), AC contactor, fampitaovana be loatra amin'ny rivotra, mpamaky Circuit Motor Protection , sns.
CDADA dia manome vokatra quatlity circuit breaker avo lenta amin'ny alàlan'ny fanamarinana kalitao hentitra isaky ny dingana producton.
30 taona mahery niainana OEM & ODM ho an'ny mpanjifa manerantany avy any Moyen Orient, Etazonia ary Eropa.
Izahay 100% dia miantoka ny vidin'ny fifaninanana amin'ny vokatra avo lenta mpamaky faribolana. Ny solontenan'ny mpanjifa sariaka sy mahafeno fepetra dia hiantoka ny serivisy tena tsara mandritra ny fotoana rehetra.
Hevitra avy hatrany
Ankoatry ny rafitry ny baiko fanarahanay matihanina dia mitazona hatrany ny mpanjifa fanavaozana haingana momba ny baiko ny mpiasanay mora tohina.
DAB7LN-40 andian-dahatsoratra DPN Residual ankehitriny ...
DAM3-160 MCCB voavolavola tranga mpivezivezy
DAM1 Series Thermal Overload Operation namboarina ...
Fanamarihana fialantsasatra amin'ny Fetibe lohataona
Ry mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka malala, hanomboka ny fialan-tsasatray izahay manomboka amin'ny 6 febroary hatramin'ny 21 febroary, ary hiverina amin'ny birao amin'ny 22 feb 2021 Misaotra anao amin'ny fanohananao lalandava. Ny mpiasan'ny Shanghai Dada Electric rehetra dia maniry ny hanao veloma anao amin'ny fety sy ...
Fampirantiana Dubai Dubai MEE Power Gen 2020
Amin'ity fampirantiana ity dia nitarika ny vokatra farany sy ny haitao farany i Dada ary nampiranty ny andiany DAM3 vaovao sy ny andiany MCB NOVA. Nanao sarontava foana izahay nandritra ny fampirantiana ary niarahaba ny mpanjifa marobe koa. Na eo aza ny fihanaky ny valan'aretina any Chine, ...
Tontosa soa aman-tsara ny foara kanto faha-127 tamin'ny Internet
Shanghai Dada dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair 127 tamin'ny taona 2020 One no sehatra vaovao. Tranonkala ofisialin'ny Canton Fair hanehoana ny vokatray. Faharoa, teknolojia vaovao. Efitra fampielezam-peo manokana 10 × 24 misy habaka feno, fifampiraharahana matanjaka ary fitarihana natsangana hamorona marketing mivantana ...
Mpamadika faribolana kely
Rivotra sisa tavela miaraka amin'ny fiarovana mahery vaika
Mpamadika faribolana ankehitriny